1997 – Year – Alpha Premium
Mortal Kombat: Annihilation Mortal Kombat လို႔ ျမင္လိုက္တာနဲ႔တင္ mortal kombat ဂိမ္းကို တန္းျမင္မိမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္ ဒီကားက mortal kombat ဂိမ္းကို အေျခခံၿပီး႐ိုက္ထားတဲ့ ကားေလးပါ။ ဇာတ္ကားက ႏွစ္ကားရိွတာပါ။ Mortal kombat (1995) နဲ႔ ယခု Mortal Kombat Annihilation (1997) ဆိုတဲ့ ႏွစ္ကားအျပင္ Mortal Kombat series ဆိုၿပီးရိွပါေသးတယ္ ။ ဒီဇာတ္လမ္းကေတာ့ Imdb rating အေနနဲ႔ကေတာ့ 3.7/10 (36,811) ပဲရရိွထားတာျဖစ္ေပမဲ့ ဇာတ္ကားကေကာင္းပါတယ္။ Mortal kombat (1995) ကားမွာေတာ့ လွ်ဴကန္ ဟာ ကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခန္းပါ။ အခု ဒီ 1997 ကားထဲမွာလဲ ကမၻာႀကီးကို ထပ္မံကယ္တင္ရမွာပါ။ ...
IMDB: 3.7/10 47,604 votes
Anaconda (1997) Anaconda (1997) ##unicode ပေ ၄၀ လောက်ထိရှည်လျားတဲ့ အန်နာကွန်ဒါမြွေကြီးတွေကိုမြင်ဖူးပါသလား။........ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အဲ့လိုမြွေကြီးတွေအကြောင်းကို အပြည့်ဝ ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှရီရှာမာမျိုးနွယ်စု အကြောင်းကို ရှာဖွေနေတဲ့ ကေး ၊သူ၏ချစ်သူ တယ်ရီရယ်နဲ့ တခြားသောအဖွဲ့ဝင်တွေက အမေဇုံတောကို သွားဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။ လမ်းတစ်ဝက်မှာ လှေပျက်ပြီး အကူညီတောင်းနေတဲ့သူကို တွေ့တော့ သူတို့ကယ်လိုက်ကြပါတယ်။ ထိုသူဟာ မြွေတွေကိုအမဲလိုက်တဲ့ မုဆိုး ဆာရွန်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရှရီရှာမာမျိုးနွယ်စုကို တွေ့ဖူးတယ်လို့ပြောပြီး လမ်းပြအဖြစ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူပြတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရာက တားဆီးထားတဲ့ သစ်သားနံရံတစ်ခုကိုတွေ့ပါတော့တယ်။ တယ်ရီက အဲ့ဒီအထဲမသွားချင်ပေမယ့် ဆာရွန်းကတော့ သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အဲ့ဒီ နံရံကိုဖောက်ခွဲကာ အထဲကိုဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားတဲ့ သူတို့ဘေးကင်းမလား။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း သတ္တဝါတွေပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ချင်နေတဲ့သူအတွက် ဒီဇာတ်ကားကို အညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ##zawgyi ေပ ၄၀ ေလာက္ထိရွည္လ်ားတဲ့ အန္နာကြန္ဒါေႁမြႀကီးေတြကိုျမင္ဖူးပါသလား။........ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ အဲ့လိုေႁမြႀကီးေတြအေၾကာင္းကို အျပည့္ဝ ၾကည့္ရႈရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရွရီရွာမာမ်ိဳးႏြယ္စု အေၾကာင္းကို ရွာေဖြေနတဲ့ ေကး ၊သူ၏ခ်စ္သူ တယ္ရီရယ္နဲ႔ တျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္ေတြက အေမဇုံေတာကို သြားဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာပါေတာ့တယ္။ လမ္းတစ္ဝက္မွာ ေလွပ်က္ၿပီး ...
IMDB: 4.8/10 96,659 votes
Green Fish Green Fish (1997) ============== IMDB Rating. =7out of 10 Rotten Tomatoes. = Not Yet Available Directed By Lee Chang Dong Green Fishရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုအတိုဆုံးရေးပြရရင် ” တကယ်တမ်းမရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းငါးစိမ်းကလေးကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း လဲပြိုရှုံးနိမ့်သွားရတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်း”ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘိုးတော်ကြီး လီချန်းဒုံရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ပါ။ ပထမဆုံးပီသစွာပဲ လီချန်းဒုံရဲ့ ဝိသေသတွေနည်းသေးတယ်။ မသိမှုရသကိုလည်း ခပ်ပါးပါးပဲသုံးသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကတော့ ပထမဆုံးကားမှာတင် ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလက်ရာတွေတိုင်းဟာ နောက်ပိုင်းလက်ရာ တစ်ချို့နဲ့ယှဉ်ရင် အမြဲအားပျော့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါက ပထမဆုံးလက်ရာတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။ ပထမဆုံး လက်ရာတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဖန်တီးသူရဲ့နှလုံးသားပျိုမြစ်နေခြင်းပါပဲ”။ Green Fishဟာ နှောင်းပိုင်းလက်ရာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အားပျော့ပေမယ့် လီချန်းဒုံရဲ့ အနုနယ်အပျိုပြစ်ဆုံး လက်ရာနဲ့ သူ့ရဲ့ Nostalgiaဖြစ်မှုကို ခံစားရမှာပါ။ ဟိုသီချင်ဟောင်းက‌လေးထဲကလို “ရင်ဆိုင်ရင်း ရှုံးနိမ့်ရင် ဘဝမှာ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ အမှားမ‌‌ျားတွေနဲ့လူ မျှော်လင့်ရင်း ဆုံးရှုံးရင်း နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာ‌တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့လူ” ဒီလိုလူတစ်ယောက် ...
As Good as It Gets As Good As It Gets(1997) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ************************************* IMDb….7.7,,,Rotten..85% ဒီတစ်ခေါက် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ … ၁၉၉၇ ၀န်းကျင်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး..ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွေလို အဓိကဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ကို လှည့်ပတ်ရိုက်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ…ဇာတ်လမ်း တင်ဆက်ပုံ အသွားအလာတွေ ထူးခြားစွာကွဲထွက်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာ James L. Brooks ရဲ့ ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့…OCD ဖြစ်နေတဲ့ လူ့ဂွစာ စာရေးဆရာလူပျိုကြီး၊ မယ်လ်ဗင် ယူဒေါလ် ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း လူငယ် Gay ပန်းချီဆရာ၊ဆိုင်မွန် နဲ့ ခွေးလေး ဗာဒဲလ် ကို အင်မတန်မှ အမြင်ကတ်သူပါ… လူ့ဂွစာလူပျိုကြီးပီပီ အသန့်အပြန့်အလွန်ကြိုက်တော့ တွေ့ကရာသေးပန်းတတ်တဲ့ ခွေးလေး ဗာဒဲလ်က သူ့အတွက်တော့ တကယ့်အနှောက်အယှက်လေးပါပဲ… ပတ်၀န်းကျင်က ဘယ်သူနဲ့မှ ကီးမကိုက်တဲ့ ဒီလူကြီးကို သည်းခံတဲ့သူတစ်ယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်…သူကတော့ မယ်လ်ဗင် သွားနေကြစားသောက်ဆိုင်က စားပွဲထိုးမလေး ကာရိုးလ် ပဲဖြစ်ပါတယ်…အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ စာလေးရေးပြီး တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးလူလူ နေတတ်တဲ့ မယ်လ်ဗင် တစ်ယောက်… ရုတ်တရက်ဆိုသလို ...
IMDB: 7.7/10 268,254 votes
Liar Liar (1997) Imdb 6.9 ရထားၿပီး PG 13 သတ္မွတ္ထားတဲ့ The Mask မင္းသား Jim Carreyပါ၀င္တဲ႔ ဟာသကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ရိဒ္ ဖလက္ခ်ာဟာ လိမ္ေျပာတဲ႔ေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ႔ေရွ႕ေနတေယာက္ပါ။ လူတေယာက္သား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိမ္ေျပာတတ္ပါတယ္။ သူဟာ အိမ္ေထာင္ကြဲေနျပီး သားေလးကိုခ်စ္ေပမယ္႔ အခ်ိန္မေပးခဲ႔ပါဘူး။ သားကိုကတိအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေပမယ္႔ မတည္တာမ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္ေတာ႔သူ႔သားက သူ႔ေမြးေန႔လာမယ္ကတိေပးျပီးမွ မလာတဲ႔အေဖအတြက္ ေမြးေန႔မွာဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ သူ႔အေဖတရက္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္လိမ္မေျပာနိုင္ပါေစနဲ႔လို႔။ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းက အမွန္ျဖစ္လာတယ္႔အခ်ိန္မွာေတာ႔…. ဘယ္လိုေတြေတာင္ ဗရုတ္သုတ္ချဖစ္ကုန္မလဲ ရႈစားၾကည္႔ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ
IMDB: 6.9/10 273,714 votes
All’s Well, Ends Well ’97 ဒီအပတ်တင်ဆက်ပေးမယ် စတီဗင်ချောင် ကားအသစ်လေးကတော့ 6/Fed/1997 ကထွက်ရှိထားတဲ့ All's Well Ends Well (1997) ဇာတ်ကားလေးပါ ဒီဇာတ်လမ်းကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Alfred Cheung ရိုက်ကူးထားပြီး ညီအကို3 ယောက်အနေဖြင့် Stephen Chow,Raymond Wong နှင့် Francis Ng တို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းနာမည်ကြီး Stephen Chow Movie Collection Myanmar (Sc Channel) နဲ့ ပူပေါင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အတော်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Raymond Wongရဲ့ Alls Well Ends Well series ထဲက ဇာတ်ကား တစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Imdb rating #6.2 ရရှိထားပြီး Seriesတစ်ခုလုံးမှာ တတိယမြောက် Ratingအများဆုံး ကားတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ Plot** ညီအကိုသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ လောင်းလို(Raymond) ၊ ဖေးလို(Francis) ...
IMDB: 6.2/10 836 votes
IMDB: 4.5/10 850 votes
IMDB: 7.2/10 260,120 votes
IMDB: 6.2/10 1,353 votes